Isitolo sezilwane i-Ornithological Island - I-Palermo
Okuhle kakhulu kubangani bakho bezilwane
5.0 /5 amavoti (amavoti angama-22)
I-Ornithological Island e-Via C. Scobar 67 a Palermo kungukuthi Isitolo sezilwane zasekhaya ekhethekile ku I-Ornithology, okwenza i I-Pet Shop iphoyinti edolobheni kubathandi bazo zonke izinhlobo zezilwane.
Isitolo sezilwane zasekhaya i-Ornithological Island ePalermo - Ice cream yezinja
Il Isitolo sezilwane zasekhaya i-Ornithological Island inokukhetha okubanzi okuphathelene nabangane abanezinyawo ezine, okuhlala kunakwa kakhulu ikhwalithi nokuphepha. The I-Pet Shop ize ithengise u-Icebou inja e-ayisikhilimu, ukuphambanisa abangane bakho ngaso sonke isikhathi ngenxa yemikhiqizo ye Isitolo sezilwane zasekhaya. Vumela uhendwe yizinhlobonhlobo zezinto ezisemashalofini ukunikela kuphela okuhle kakhulu ezinambuzaneni okuthandayo: Isitolo sezilwane zasekhaya i-Ornithological Island kungenzeka! Ngena ungene ku I-Pet Shop ukuthola i-ayisikhilimu yenja ngamehlo akho.
I-pet shop Ornithological Island ePalermo - Ornithology
Il Isitolo sezilwane zasekhaya i-Ornithological Island e Via C. Scobar a Palermo iqhosha nge-assortment enkulu kakhulu ku- I-Ornithology, kusuka kukhwalithi eqinisekiswe ngemikhiqizo ehlonishwayo: i-Ornitalia, iFomevet, iLegazin, iVersele-laga, iManitoba, iPineta, i-lus, i-Raggio di sole supplements. Izisebenzi ze I-Pet Shop Ornithological Island ePalermo iyakwazi ukululeka ngokuthenga okuhambisana kahle nezidingo zakho kanye nezilwane ezifuywayo. The Isitolo sezilwane zasekhaya yindawo enhle yomhlangano yabathandiI-Ornithology, kubalandeli beqiniso bezinyoni zezinhlobonhlobo.
I-Animal Shop Ornithological Island ePalermo - Inhlanzeko nemikhiqizo yokubulala izinambuzane
Ngo Isitolo sezilwane zasekhaya i-Ornithological Island kunemikhiqizo eminingi yokugcina izilwane zakho zinempilo, ziqinile futhi zihlanzekile ngamanani atholakalayo ngaso sonke isikhathi. Izisebenzi ze I-Pet Shop izokuqondisa ngezeluleko zokuqapha lapho ukhetha umkhiqizo ofanele ngokwezidingo zezilwane zakho, njengemikhiqizo yokuhlanzeka yomkhiqizo we-h24, iFomuevet, isilwanyana esifuywayo, iSanibox, seresto, i-formevet T. Kukhona amahloni kuphela lokuzikhethela ku Isitolo sezilwane zasekhaya i-Ornithological Island a Palermo. Thembela ku I-Pet Shop of ubuhle, noma okhethekile ku I-Ornithology: ikhambi Isitolo sezilwane zasekhaya i-Ornithological Island.
I-Animal Shop Ornithological Island ePalermo - Okuphakelayo nezithasiselo
Il Isitolo sezilwane zasekhaya i-Ornithological Island e-Via C. Scobar 67 a Palermo unakekela impilo nobuhle babangani bakho abancane, ukukunikeza nge-assortment ebanzi yemikhiqizo yokunakekelwa neyokondla. The Isiqhingi sasePetro Ornithological Island ine-Prolife veterline line, i-Oxbow feed rabi, ama-supplements kanye nembewu ye-ornithological, iphakela izinja namakati omkhiqizo omuhle kakhulu, kufaka phakathi uMonge, uGolosi, Royal Canin, Disugual, Ukunambitheka Kwezilwane Zasendle. Ngabe ulindeni ukuthenga izinto ezibalulekile zabangani bakho koyedwa I-Pet Shop ngubani okhathalela ngempela inhlala-kahle yabo? Shintsha kusuka Isitolo sezilwane zase-Ornithological Island ePalermo.
Ikheli: Nge-Cristoforo Scobar, 67
Ucingo: 091 7472406
Umakhala ekhukhwini: 338 2243082
Inombolo ye-VAT: 06438930825
Eminyakeni engu-3 edlule
Isitolo esihle, ngiyakutusa!